जलविद्युतमा इथोपियन मोडल आवश्यक छ | गृहपृष्ठ
As of 2018-06-25 13:57:15
GBLBS 607 (3536) (0)
Home अन्तरवार्ता जलविद्युतमा इथोपियन मोडल आवश्यक छ
अन्तरवार्ता 299 views
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष, हाइड्रो सोलुशन लिमिटेड
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुड्किलो भनी भनिँदै आएको छ । सरकार, निजीक्षेत्रका साथै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालको ऊर्जाक्षेत्र सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि वकालत र सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आएको हाइड्रो सोलुशन लिमिटेडले गरेको काम र यो क्षेत्रका समस्याका विषयमा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकनी :
हाइड्रो सोलुशनले के के गरिरहेको छ ?
हाम्रो कम्पनीले आफै लगानी गर्दैन । हामी एउटा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने संस्था मात्र हौं । हामी परियोजनाको लाइसेन्स लिन्छौं र फिजिबिलिटी (सम्भाव्यता) हेरेर अरू कम्पनीमा ट्रान्सफर गरेपछि मात्रै त्यो कम्पनीले बनाउँछ । कम्पनीले आफै काम नगरी अन्य कम्पनी स्थापित गर्दै त्यसैमार्फत लगानी गर्दै आएको छ । दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम एड्भोकेसी (वकालत) हो । हामी निकै बलियो एड्भोकेटर हौं । यसमा हामी दाबी नै गर्छौं । नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, भुटानका साथै चीनमा पनि हामी सशक्त ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं । यसले विद्युत् क्षेत्रका सबै कुरा हेर्छ, तर कम्पनीले स्वामित्व लिँदैन । कुनै कम्पनीलाई अप्लाई गर्न लगाउँछौं । हाम्रो मुख्य काम योजना तथा लगानीका लागि खाका तयार पार्ने हो ।
यो कम्पनीले काम गरेका जलविद्युत् परियोजना कुन कुन हुन् ?
मेरो नेतृत्वमा बुटवल पावर कम्पनीमा काम भएको हो । बुटवल पावर कम्पनी निजीकरण भएको थियो । हाम्रो साङ्ग्रिला कम्पनीले यसलाई किनेको थियो । त्यसपछि ४ मेवाको खुदी हाइड्रो अघि बढायौं । ४ दशमलव २ मेवाको बरम्ची अपग्रेड ग¥यौं । अहिले २० मेवाको मोदी अन्तिम चरणमा छ । करीब ४ महीनामा सञ्चालन हुनेछ । निर्माणको चरणमा रहेको ४२ दशमलव ९ मेवाको आखुखोला साढे ३ वर्षमा सम्पन्न हुन्छ । यस्तै, १ सय ६४ मेवाको कालीगण्डकी गोर्ज पनि २०१९ देखि निर्माण शुरू भएर ५ वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।
यस क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा भोगेका समस्या के के हुन् ?
अहिले पनि आयोजनामा हिंसात्मक गतिविधि भएका छन् । लगानी भए पनि लाइसेन्स पाउने अवस्था छैन । लगानीको प्रतिबद्धता आएमा लाइसेन्स तत्काल पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीयको अवरोध छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए दिन ६ महीना लगाउँछ । अनलाइन एप्लिकेशन दिएपछि आफै पीपीए हुने व्यवस्था गराउनुपर्छ । यदि त्यसो नभएमा बढीमा ३ महीनामा पीपीए हुने नीति आउनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, विगत १४/१५ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा सकारात्मक नतीजा देखिएका छन् । १ सय ७ वर्षमा हामीले १ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेका थियौं । यो ३ वर्षमा १२ सय मेवा बनाउँछौं । ३ वर्षमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि सरकारी अनुमति लिन ६ वर्ष लाग्ने गरेको छ, लाग्नुपर्ने त ६ महीना हो । सरकारी वनदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा धाउँदा यो समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्को विकास द्रुत गतिमा हुन सक्दैन ।
अब सरकार इथियोपियन मोडलमा जानुको विकल्प छैन । सम्पूर्ण प्रक्रिया ६ महीनामा पूरा हुने भएकोले यो मोडलमा जलविद्युत्को विकास अनिवार्य देखिएको छ । सरकारले राखेका विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्न पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । ३ प्रतिशतमा रहेको ऊर्जाको खपत वृद्धि गर्नुपर्छ । बिजुली बढी हुन्छ भन्ने तर्क आएका छन्, तर त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने विषयमा खासै चासो दिएको पाइएको छैन । वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का लागि खुला गर्नुपर्छ ।
ऊर्जाविज्ञका दृटिकोणले यस क्षेत्रमा अवसर र चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
निजीक्षेत्र अघि आउन तयार छ । कुनै पनि देशको विकासमा निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम सरकारले गर्ने होइन । सरकारले निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारलगायतमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारका नीति राम्रा छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । तरलताले जलविद्युत् क्षेत्रलाई ‘किल’ गरेको छ । राज्यले एक्जिम फण्डहरू लिई निजी बैङ्कहरूलाई दिएर सस्तो ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो भएमा निजीक्षेत्रले १ वर्षमा १ हजार मेवाका आयोजना बनाउन सक्छ ।
चुनौतीको रूपमा सरकार नै छ । सरकारले सहजीकरणभन्दा पनि निगरानी बढी गर्छ । विद्युत् नियमन आयोग आउँदै छ । यसले पनि डर देखाएको छ । जलविद्युत्मा मुनाफा छैन ।
अहिले स्थानीय तहलाई १ मेवाका जलविद्युत् बनाउने अधिकार दिइएको छ । यस्तो अभ्यास कत्तिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ?
मानौं, स्थानीयस्तरमा ४० मेवाको सम्भावना छ भने त्यहाँ १ मेवाको अधिकार लागू हुनुहुन्न, त्यसले जलविद्युत्को क्षमतालाई नै खतरा हुन्छ । जस्तै– ३७ मेवाको काबेली बनाउँदा त्यसले ८ सय मेवाको तमोरलाई नै बिगार्‍यो । १ मेवा स्थानीय निकायलाई दिनु राम्रो हो । तर, यसको अन्तिम स्वीकृति भने केन्द्रबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसको व्यापक सम्भावनालाई मार्नु हुन्न ।
१० असार २०७५, आईतवार ०९:४३
बालस्वास्थ्य राम्रो राख्न पौष्टिक आहार र हेरचाहमा ध्यान दिनुपर्छ
८ असार २०७५, शुक्रबार ०७:३५
८ असार २०७५, शुक्रबार ०७:०४